Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 5 June 2019	• 20 Comments
Miandrandra fatratra ity loza mitatao amin'ny aretina PBS-er (tambajotra matihanina) amin'ny klika any Den Kolder. Azafady mba tsarovy izao fotoana izao tsy misy lalao lalina! Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy misy PsyOp (fiasa ara-psikolojika) hanosika ny lalàna vaovao. Mazava ho azy fa izany no fanehoana an'i Mark Rutte ary ny tazo dia nandositra ny TBS tao amin'ny toeram-pitsaboana Michael [...]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 3 Aprily 2019	• 16 Comments
Satria toa ny olana momba an'i Anne Faber dia olana, fanehoan-kevitra, vahaolana, PsyOp (fiasa ara-psikolojika) izay tsy maintsy ahazoana antoka fa afaka misaina ny sivily tsy misy fahazoan-dàlana ny tsirairay ary afaka omena ny fanjakana, mangataka izany isika Tsy maintsy mandalo io fanadihadiana io ihany koa ireo mpanao politika. Vakio ny antontan-taratasy rehetra [...]
DNB Amsterdam PsyOp efa maty faty mba hahafahana misambotra olona tsy misy mpitsabo sôsialy?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 13 Febroary 2019	• 21 Comments
Andro vitsy lasa izay, nisy adihevitra be teo amin'ny fampahalalam-baovao momba ny maty teratany Briton Michael Fudge ao amin'ny banky De Nederlandse any Amsterdam. Mety hipoitra ny korontana satria te hanao famonoan-tena ny lehilahy. Fitrandrahana vaovao ao anatin'ireo tantara an-kira manasongadina ny fampitam-baovao ataonay hamoronana vaovao sandoka? Nahoana [...]
Peter R. de Vries manampy ny psyop an'i Anne Faber mitohy mitifitra hafatra momba ny rain'i Michael P.
Filed in ANNE FABER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 16 Oktobra 2017	• 17 Comments
Peter R. de Vries, dia mety hanohy hitazona ny psyop an'i Anne Faber amin'ny fametrahana hafatra ao amin'ny Twitter ity maraina ity, izay nanambarany fa nandriaka ny rain'ny 1 avy amin'ilay tovovavy nanao an-keriny noho ny fanampiana tamin'ny politika Holandey. Raha mametraka fanontaniana goavana i Holandy dia manamarika ny fahatokisana ny famonoana an'i Anne Faber manomboka, [...]
Total visits: 13.077.600